Gabadhii u doonaneyd suxufigii reer Sacuudi ee la dilay Jamal Khaashuqji iyo koox u doodda xuquuqda aadanaha oo uu aas-aasay, ayaa maxkamad ku taalla Mareykanka ka diiwaan-geliyey dawacd ka dhan ah dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan, oo lagu eedeeyey dilkiisa.
Dacwaddan, oo ah mid madani ah, ayaa waxa ay Maxamed Bin Salmaan ka dooneysa magdhow aan la shaacin, waxaana sidoo kale qeyb ka ah 20 eedeysane oo kale oo Sacuudiyaan ah.
Dacwadda ayaa kusoo beegmaysa xilli xidhiidhka Mareykanka iyo Sacuudiga uu sii xumeeyey dilkii weriyaha oo dhacay 2018, xadgudbyada xuquuqda aadanaha ee lagu eedeeyo Riyadh iyo ku lug lahaashaheeda dagaalka Yemen.
Safaaradda Sacuudiga ee Washington kama jawaabin codsi la xidhiidhay inay ka hadasho dacwadda.
Maxamed Bin Salmaan ayaa horey u beeniyey inuu wax lug ah ku lahaa dilka Khaashuqji, oo haystay sharciga deganaanshaha Mareykanka.
Khaashuqji oo aad u dhaliili jiray boqortooyada, islamarkaana wax ku qori jiray wargeyska Washington Post, ayaa bishii October 2018 lagu dhex-dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Waxa uu halkaas u tegay inuu kasoo qaato warqado uu u baahnaa si uu guursado gabadha ay is-calmadeen ee Hatice Cengiz, oo ah muwaadin Turkish ah.
Cengiz iyo ururka Dimoqraadiyadda Dunida Carabta ee loo yaqaan DAWN, oo ah urur uu Khaashuqji aas-aasay oo ka dhisan Mareykanka, ayaa dacwadda ka diiwaan geliyey maxkamad federal, oo ku taalla Washington DC.